DAAWO:Somaliland oo qaylo afka furatay & Ciidamadii ugu badnaa oo ku wajahan duleedka Ceerigaabo xili Muuse Biixi….. – Puntlandtimes
DAAWO:Somaliland oo qaylo afka furatay & Ciidamadii ugu badnaa oo ku wajahan duleedka Ceerigaabo xili Muuse Biixi…..
QARDHO(P-TIMES)- Xiisadda u dhaxaysa ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa cirka isku sii shareeraysa kadib markii Somaliland ay dhawaan ay bilowday inay ciidamo ku soo daabusho qaybo kamid ah gobolka Sanaag.
Masuuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland oo warbaahinta kula hadlay Ceerigaabo ayaa walaac xoogan ka muujiyey cududada ciidan ee kaga soo wajahan Bariga gobolka Sanaag xili ciidamado badan ay ku wajahan yihiin deegaanada Yubbe, Hadaaftimo iyo deegaano dhaca duleedka Ceerigaabo oo xuduuda Puntland ah.
Somaliland oo bilwoday daandaansiga iyo hugufka ciidanka ee gobolka Sanaag ayaa markan waxa ay wayday taageero ay ka filanaysay shacabka gobolka Sanaag oo ku dhawaaqay inay la dagaalami doonaan.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qorshihiisii hore ahaa in uu qabsado deegaanada Xingalool, Badhan iyo Dhahar isaga oo ku mar marsoonaya duulaan ay ciidamadiisu marar badan kala kulmeen Jabhadda Caarre, taas oo sababtay in xiisad ka dhex qaraxdo dhinacyada Puntland iyo Somaliland.
Halkee Ayuu Marayaa Wajiga Saddexaad Ee Barnaamijka Deyn Cafinta Soomaaliya?
DAAWO MUUQAAL: Eheladii ay ka dhasheen Raggii lagu xukumay dilka ee ka dambeeyey Dilkii Caasho Ilyaas oo Afka furtay, diidayna